COMODO INTERNET NCHE FREE DOWNLOAD RUSSIAN VERSION - MMEMME NYOCHA - 2019
Ndepụta Ịntanetị Comodo 10.2.0.6526
A maara usoro sistemụ Windows dị ka ewu ewu. Ọ bụ n'ihi nke a na anyị nwere nnọọ nnukwu nhọrọ nke ngwanrọ nke ụdị dị iche iche. Nke ahụ bụ otu ndị na-ewu ewu ma na-awakpo ndị na-agbasa virus, ikpuru, ọkọlọtọ, na ihe ndị yiri ya. Ma ọbụna nke a nwere ihe - a dum agha nke antiviruses na firewalls. Ụfọdụ n'ime ha na-efu nnukwu ego, ndị ọzọ, dị ka dike nke isiokwu a, bụ n'efu.
Uzo ụlọ ọrụ Amerịka mepụtara Comodo Internet Security ma na-agụnye ọ bụghị naanị na antivirus, kamakwa firewall, nchedo proactive na igbe ntụ. Anyị ga-enyocha ọrụ nke ọ bụla obere oge. Mana nke mbụ, m ga-achọ ịme gị obi ike na, n'agbanyeghị nnyefe n'efu, CIS nwere ezigbo nchebe dị mma. Dika nyocha onwe onye, ​​usoro a choputara 98.9% (n'ime uzo abuo 23,000). Ihe si na ya pụta bụ na ọ bụghị ihe dị mma, mana maka antivirus free bụ ọbụna ihe ọ bụla.
Nchedo nje virus bụ ihe ndabere maka usoro ihe niile ahụ. Ọ gụnyere ịlele faịlụ ugbua na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ ndị nwere ike iwepụ. Dị ka ọtụtụ antiviruses ndị ọzọ, e nwere ndebiri ndeji nke e mere maka ịgụrede kọmputa na ngwa ngwa.
Otú ọ dị, ọ dị mma ịchọta na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịmepụta ụdị nyocha gị. Ị nwere ike ịhọrọ faịlụ ma ọ bụ nchekwa dị iche iche, hazie ntọala nchịkọta (faịlụ ndị na-enweghị ike ịmepụta, ịwụgharị faịlụ buru ibu karịa nha a kapịrị ọnụ, nyochaa ihe kachasị mkpa, arụ ọrụ akpaaka mgbe achọpụtara ihe iyi egwu, na ụfọdụ ndị ọzọ), ma hazie oge ịhazi ya.
E nwekwara usoro mgbanyụ nje virus niile nwere ike iji mee ka oge maka igosipụta nlele, dozie faịlụ kachasị na ha ma hazie ihe nṅomi dị na ntanye na ọrụ ndị ọrụ. N'ezie, maka ihe nchebe, ụfọdụ faịlụ kacha zoro ezo site na antivirus "anya". Ị nwere ike ime nke a site na ịgbakwunye nchekwa ndị dị mkpa na faịlụ dị iche iche na ndị ọzọ.
Maka ndị na-amaghị, Firewall bụ ngwaọrụ nke nyochara okporo ụzọ na-apụ apụ maka nzube nchebe. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke a bụ ihe na-enye gị ohere ịghara ijide ihe ọ bụla jọgburu onwe ya mgbe ị na-egwu weebụ. E nwere ọtụtụ ụdị firewall na CIS. Ndị kasị eguzosi ike n'ihe n'ime ha bụ "ọzụzụ ọzụzụ," ihe siri ike bụ "zuru igbochi". O kwesiri iburu n'uche na usoro nke ime ihe na-adaberekwa na netwọk ị jikọtara. Ụlọ, dịka ọmụmaatụ, nchekwa dị ntakịrị, na ebe ọha - kachasị.
Dị ka ọ dị na ngalaba nke mbụ, ị nwere ike ịhazi iwu nke gị ebe a. Ị setịpụrụ usoro nkwekọrịta, ntụziaka nke ihe (ịnakwere, zipu, ma ọ bụ abụọ), na mmemme nke ihe omume ahụ mgbe achọpụtara ọrụ.
Na ebe a bụ ihe dị iche iche na ọtụtụ ndị asọmpi enweghị. Ihe kachasị mkpa nke a na-akpọ Sandbox bụ ịhapụ usoro ntinye anya site na usoro ahụ n'onwe ya, ka ọ ghara imerụ ya. A na-agbakọọ ngwanrọ nwere ike ịdaba na ya site na iji nchekwa nchekwa na HIPS, nke nyochaa mmemme omume. Maka omume enyo, usoro a nwere ike itinye aka ma ọ bụ tinye aka na sandbox.
O kwesịkwara ịkọtara ọnụ bụ ọnụnọ nke "Desktọpụ Desktọpụ" nke ị na-agaghị agba ọsọ, ma ọtụtụ mmemme ozugbo. O di nwute, nchebe di nke na ọbụna na-emepe nseta ihuenyo emezughị, ya mere, ị ga-ewere okwu m maka ya.
Ọrụ ịnọgide na-arụ ọrụ
N'ezie, Comodo Internet Security toolkit anaghị ejedebe na atọ ọrụ depụtara n'elu, Otú ọ dị, ọ dịghị ihe dị ukwuu ịkọ banyere ndị ọzọ, n'ihi ya, anyị ga-enye ndepụta na nkọwa dị mkpirikpi.
* Ọnọdụ egwuregwu - na-enye gị ohere ịchekwa ọkwa mgbe ị na-agba ngwa ngwa ihuenyo zuru oke, nke mere ka ị ghara ịdọpụ uche gị site na ndị ọzọ.
* "Ígwé ojii" Doppler - na-eziga faịlụ enyo ndị na-adịghị na nchekwa data nje na Comodo sava maka nyocha.
* Ịmepụta diski nnapụta - ị ga-achọ ya mgbe ị na-achọpụta kọmputa ọzọ nke nwere nje virus.
* ọtụtụ ọrụ
* ọtụtụ ntọala
* Ọ dị mma, ma ọ bụghị ọkwa kachasị mma
Ya mere, Comodo Internet Security bụ ezigbo antivirus na firewall, nke gụnyere ọtụtụ atụmatụ bara uru. O di nwute, ọ gaghị ekwe omume ịkpọ usoro a kachasị mma n'etiti free antiviruses. Ka o sina dị, ọ bara uru ịṅa ntị na ya ma nyochaa onwe gị.
Ntinye nhọrọ maka Uninstall antivirus Internet Kaspersky Internet Nche Norton internet nche Comodo Antivirus
Comodo Internet Security bụ ngwá ọrụ n'efu iji nye nchedo kọmputa zuru ezu. Chọta ma wepu nje, trojans, ikpuru, gbochie mwakpo hacker.
Udi: Antivirus maka Windows
Onye Mmepụta: Comodo Group